Nhau - Kuenzanisa kwekuita pakati peServo mota uye yekufamba mota
Seyakavhurika-loop kudzora system, yekumhanyisa mota ine hukama hwakakosha neazvino digitaalinen yekudzora tekinoroji. Mune yazvino epamba digitaalinen kudzora system, yekumusoro mota inoshandiswa zvakanyanya. Nechitarisiko chedhijitari izere AC servo system, AC servo mota inowanda uye inoshandiswa kudhijitari kudzora system. Kuti ugone kuchinjira kune yekuvandudza maitiro edhijitari kudzora, mazhinji eanodzora masisitimu anotora anotsika mota kana akazara edhijitari AC servo mota seyakakwira mota. Kunyangwe iwo akafanana mukutonga maitiro (kurova kwechitima uye chiratidzo chekunongedzera), iwo akatosiyana mukuita uye mukushandisa. Kuita kwevaviri kunoenzaniswa.
Kutanga, Yakasiyana kutonga kwakaringana
Iyo yekutsika Angle yezvikamu zviviri-chikamu chemasanganiswa yekutsika mota kazhinji 1.8 ° uye 0.9 °, uye Angle yekutsika yechishanu-chikamu chemasanganiswa yekutsika mota kazhinji 0.72 ° uye 0.36 °. Kune zvekare mamwe epamusoro-mashandiro ekumhanyisa mota nekugovanisa yekumashure nhanho Angle kuti ive diki. Semuenzaniso, danho Angle remaviri-chikamu chemasanganiswa ekutsika mota inogadzirwa neNewKYE inogona kumisikidzwa 1.8 °, 0.9 °, 0.72 °, 0.36 °, 0.18 °, 0.09 °, 0.072 ° uye 0.036 ° nekufona kodhi switch, iyo inowirirana neiyo nhanho Angle yezvikamu zviviri uye zvishanu-chikamu chemasanganiswa yekutsika mota.
Iko kudzora kunyatso kwe ac servo mota inovimbiswa neiyo inotenderera encoder kumucheto kumashure kweiyo mota shaft. Kutora NEWKYE yakazara digitaalinen AC servo mota semuenzaniso, kune mota ine yakajairwa 2500 mutsara encoder, iyo pulse yakaenzana ndeye 360 ​​° / 8000 = 0.045 ° nekuda kwekushandiswa kwequadruple frequency tekinoroji mukati memutyairi. Kune mota ine 17-bit encoder, mutyairi anogamuchira 131072 pulse motors kwekutendeuka kumwe chete, ndiko kuti, kurova kwayo kwakaenzana i360 ° / 131072 = 0.0027466 °, inova 1/655 yeiyo pulse yakaenzana neyekutsika mota ine nhanho Angle ye1.8 °.
Chechipiri, hunhu hwepasi frequency hwakasiyana
Pakumhanya kwakaderera, iyo inotsika mota inokasira kune yakaderera-frequency vibration. Iyo vibration frequency inoenderana neyakaremerwa mamiriro uye mutyairi kuita. Inowanzoonekwa sekuti vibration frequency ihafu yeasina-mutoro wekubvisa-kuwanda kweiyo mota. Iyo yakaderera-frequency vibration phenomenon yakatemwa neanoshanda musimboti weiyo stepper mota haina kunaka zvakanyanya kune zvakajairika mashandiro emuchina. Kana iyo yekumhanyisa mota ichishanda yakaderera kumhanya, damping tekinoroji inofanirwa kuve inowanzo shandiswa kukurira chinoitika che low frequency vibration, senge yekuwedzera damper pane mota, kana mutyairi pakushandisa diki tekinoroji.
Iyo AC servo mota inomhanya zvakanyatsonaka uye haina kudedera kunyangwe pakumhanya kwakaderera. Ac servo system ine resonance yekudzvinyirira basa, inogona kuvhara kushomeka kwechimakanika kuomarara, uye iyo sisitimu ine frequency yekuongorora basa (FFT), inogona kuona mechiniki poindi yekudengenyeka, zviri nyore kugadzirisa iyo system.
Chechitatu, iyo yenguva pfupi chimiro chakasiyana
Iyo goho torque yeanotsika mota inoderera pamwe nekuwedzera kwekumhanya, uye inodonha zvine mutsindo padanho repamusoro, saka iyo yekumhanyisa yekumhanyisa yekumhanyisa kazhinji iri 300 ~ 600RPM. Ac servo mota inogara iriko torque kuburitsa, ndokuti, inogona kuburitsa yakatarwa torque mukati meiyo yakatarwa kumhanya (kazhinji 2000RPM kana 3000RPM), uye inogara iine simba kuburitsa pamusoro peiyo yakatarwa kumhanya.
Chechina, kuwandisa kugona kwakasiyana
Inokurumidza mota haina huremu hwakawanda. Ac servo mota ine simba rakakura rekuwandisa. Kutora Sanyo AC servo system semuenzaniso, ine kugona kwekumhanyisa kuwandisa uye torque kuwandisa. Iyo hombe torque inguva mbiri kana nhatu dzeiyo yakatarwa torque uye inogona kushandiswa kukurisa inertial torque yeiyo inertial mutoro pakutanga. Nekuti iyo yekutsika mota haina yakanyanya kuwanda kugona, kuitira kukunda ino inertia nguva mukusarudza, zvinowanzo fanirwa kusarudza mota ine hombe torque, uye muchina haudi iwo yakakura torque yakadaro panguva yakajairika mashandiro, saka izvo zvinoitika zvemarara torque zvinoitika.
Chechishanu, Yakasiyana mashandiro mashandiro
Inokurumidza mota inodzorwa neakavhurika-chiuno kudzora. Kana iyo yekutanga frequency yakanyanya kukwirira kana mutoro wakanyanyisa, zviri nyore kurasikirwa nhanho kana mudanga; kana iyo spidhi yakanyanya kukwirira, zviri nyore kupfuudza kana uchimira. Naizvozvo, kuitira kuve nechokwadi chekutonga kurongeka, dambudziko rekumhanya nekumhanyisa kudonha rinofanirwa kutarisirwa zvakanaka. Ac servo drive system yakavharwa-loop kudzora. Mutyairi anokwanisa kuenzanisa zvakaringana zviratidzo zveiyo mota encoder. Icho chemukati chikamu chine chinzvimbo mhete uye yekumhanyisa mhete.
Yechitanhatu, Yakasiyana nekukurumidza mhinduro yekuita
Zvinotora mazana maviri kusvika mazana mana emamiriseconds kuti mota inotsika ikurumidze kubva kuzororo kuenda kumhanyisa yekushanda (kazhinji mazana emhindu paminiti). Iyo yekumhanyisa mashandiro e AC servo system yakanaka. Kutora NEWKYE 400W AC servo mota semuenzaniso, zvinongotora mamiriseconds mashoma kuti akurumidze kubva kuzororo kusvika pakumhanya kwayo kunosvika 3000RPM, iyo inogona kushandiswa mukutonga zviitiko zvinoda kutanga nekukurumidza uye kumira.
Kupfupisa, AC servo system iri pamusoro kune inotsika mota mune akawanda mashandiro maficha. Nekudaro, yekumhanyisa mota inowanzo shandiswa kuita mota mune dzimwe nguva dzisinganyanye kudenha. Naizvozvo, mune dhizaini maitiro eiyo system yekutonga kuti utarise izvo zvinoda kudzora, mutengo uye zvimwe zvinhu, sarudza yakakodzera kudzora mota.
Mbeu dzakauchikwa Stepper mota, 220 Volt Ac Servo mota, Servo Motor Actuator, 6 Waya Stepper mota, Ac Stepper mota, Yakavharwa Loop Stepper mota Mutyairi,